Wasaaradda caafimaadka Puntland oo maanta qalabka looga hortago COVID-19 kala wareegtay Hay’adda WHO | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda caafimaadka Puntland oo maanta qalabka looga hortago COVID-19 kala wareegtay Hay’adda...
Wasaaradda caafimaadka Dawlad Goboleedka Puntland ayaa maanta kala wareegtay hay’adda caafimaadka Aduunka WHO qalabka looga hortago COVID-19, kaasi oo loogu talagay in la isticmaalo waqtiga doorashooyinka horu dhaca ah ka dhacayaan degmooyinka Qardho, UFayn iyo Eyl.
Mudane Cabdirisaaq Abshir Xirsi Agaasimaha caafimaadka asaasiga ah ahna kusimaha agaasimaha guud ayaa qalbka kala wareegay madaxa WHO Puntland.
Agasimaha ayaa uga mahadceliyay WHO qalabkaan ay soo gaarsiiyeen wasaaradda waqtigan muhiimka ah, waxa uu xusay in wasaaradduna qalabkaan iyo mid kale oo ay ku kordhiso ku wareejin doonto guddiga KMG doorashooyinka Puntland TPEC.
Isla goobka qalabka lagu wareejiyay ayaa agaasimuhu waxa uu qalabkii ku wareejiyay xoghayaha guud ee guddiga KMG doorashooyinka Puntland Marwo Ubax Abshir ayaa kala wareegtay.
Qalabkaan ayaa la gayn doonaa degmooyinka ay ka dhacayaan doorashooyinka golayaasha degmyooyinka ee horu dhaca ah.
Wasaaradda ayaa guddiga kmg doorshooyinka kala shaqaynaysa dhanka caafimaadka gaar ahaan xaga doorashooyinka, horay ayay wasaaraddu degmooyinka ugaysay gaari Ambulus ah iyo kooxo caafimaad oo la soconayay isku soo baxyada ururada hadii khatar caafimaad timaado
Previous articleMadaxweynaha Jubbaland oo qaabilay xubnaha Aqalka Sare ee la doortay
Next articleWasiirka Ganacsiga Soomaaliya oo lakulmay dhigiisa Turkiga